I-Ocean Front Room e-Pakarang Beach - i-Khao Lak
Ikamelo e-i-resort ibungazwe ngu-Pachara
U-Pachara unokuphawula okungu-41 kwezinye izindawo.
Amakamelo ehhotela avulekile angu-60Sq'M ahlotshiswe ngamatshe phansi. Thola ngaphambi kolwandle futhi unokufinyelela kalula ogwini elinendathane yesikhala ongasijabulela, indawo yokubhukuda, ukuqina kanye nendawo yokudlela kuyatholakala ukuze ufinyeleleke.
Sinempahla evulekile kakhulu enegumbi elikhulu, wonke amakamelo ahlukene futhi ayimfihlo, alungele ukuphumula kanye ne-WFH. Asinawo amagumbi ahlangene, wonke amaphaseji anomoya ohelezayo futhi avulekile.
Thola ogwini lwasePakarang kanye nebanga lokuhamba ukusuka ku-Memories Bar. Jabulela uhambo olude lolwandle noma ukugijima emgwaqeni othule. Izinto eziningi ongazibona endaweni ukusuka esiqhingini ukuya esiqhingini ukuya ku-trekking, i-rafting, noma ujabulele ukudla kwasendaweni ngebanga lokushayela.
Umsingathi ulindile. Abasebenzi basehhotela bayafinyeleleka ukuze baxhumane futhi baqondise ngohlelo lokusebenza lwe-LINE amahora angama-24.